Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abantu baseLondon bazimisele ukukhokela ukubuyisela uhambo lokuzonwabisa kulo nyaka uzayo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ziindaba ezimnandi ukuba abathengi baseLondon babonakala belangazelela ukubaleka ngo-2022- banethamsanqa lokuba nezikhululo zeenqwelomoya ezintathu eziqhagamshelwe kakuhle kunye nothungelwano lukaloliwe lwamazwe ngamazwe emnyango wabo ukuze bakwazi ukuthatha ithuba elipheleleyo lokuqalisa kwakhona kweenkonzo eYurophu kwaye ngaphaya, ngakumbi njengoko izithintelo zokuhamba ziqhubeka zilula.
Abantu baseLondon bajonge ukukhokela indlela eya kwiindawo zokuphumla zelanga ehlotyeni ngo-2022, njengoko uninzi lwabo besithi bazakubhukisha iiholide - kwaye bafuna ukutshiza imali eninzi kwizicwangciso zabo zokuhamba kulo nyaka uzayo, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) nguWTM. eLondon.
Bangcono emva kobhubhane kunabanye kulo lonke elase-UK kwaye bazimisele ngakumbi ukuthenga uhambo oluphoswe kakhulu phesheya, ityhila iNgxelo yoShishino lweWTM.
Uphando lubonisa ukuba i-28% yabantu baseLondon bafuna ukuthatha ubuncinane iholide enye kwi-2022 - xa kuthelekiswa malunga ne-22% yabathengi kulo lonke uhlanga. Ngaphaya koko, ngaphantsi komnye kwabayi-10 (9%) abathi abasayi kubhukisha iholide ka-2022, ngaphantsi kakhulu kwe-16% yenani elibonwa kwilizwe lonke.
Ikota yathi baya kuchitha "kakhulu kakhulu" - ngomda we-20% okanye ngaphezulu - xa kuthelekiswa ne-17% kwilizwe lonke, kwaye i-28% yathi baya kuchitha "kancinci ngaphezulu" kunangaphambili - ukuya kwi-20% ngaphezulu - xa kuthelekiswa ne-25% kuzwelonke.
Kwakhona, uphando lubonise abantu abaninzi baseLondon kubonakala ngathi baphume kulo bhubhani bekwimeko engcono yezemali, njengoko i-29% ithe ngoku bangcono kunangaphambili kwe-Covid-19, xa kuthelekiswa nomndilili we-19% kulo lonke elase-UK.
Ekugqibeleni, uphando lubonise ukuba abantu baseLondon bazimisele ukuchitha imali yabo kwiholide, njengoko isibini kwisithathu kubo (66%) sithe baya kuchitha imali yabo eyongezelelweyo kwikhefu, xa kuthelekiswa nomyinge wama-63% kwilizwe lonke.
Uphando luhamba kakuhle ekubuyiselweni komzi-mveliso wokuhamba wase-Bhritane ophuma ngaphandle, ebonisa ukuba kukho imfuno eyomeleleyo ye-pent-up yokuphuma emva kobhubhane njengoko kuthintelwa lula, ngamathuba amaninzi okukhula kubathengi kwikomkhulu.
Oku kunokuba ngumbulelo kukhetho olubanzi lweenqwelomoya kunye nohambo lukaloliwe, njengoko abantu baseLondon banokuhamba besuka kwiindawo ezintathu eziphambili zamazwe ngamazwe - iHeathrow, iGatwick kunye neStansted - kunye nezikhululo ezifana neSt Pancras International kwiinkonzo ze-Eurostar.
Enye into inokuba sisantya esicothayo sokubuyiselwa kwezikhululo zeenqwelo moya ngaphaya kweLondon nakumazantsi mpuma eNgilani, okuthetha ukuba abantu abaninzi abahamba ngeeholide kwimimandla banokhetho olumbalwa kunangaphambi kobhubhani.
I-WTM London, isiganeko esikhokelayo kwihlabathi jikelele kwishishini lokuhamba, lenzeka kwiintsuku ezintathu ezizayo (ngoMvulo 1 - ngoLwesithathu 3 Novemba) e-ExCeL - London.
USimon Press, uMlawuli weMboniso weWTM eLondon, uthe: “Ziindaba ezimnandi ukuba abathengi baseLondon babonakala belangazelela ukubaleka ngo-2022- banethamsanqa lokuba nezikhululo zeenqwelomoya ezintathu eziqhagamshelwe kakuhle kunye nothungelwano lukaloliwe lwamazwe ngamazwe emnyango wabo ukuze bakwazi. sebenzisa ngokupheleleyo ukuqaliswa kwakhona kweenkonzo eYurophu nangaphaya, ngakumbi njengoko izithintelo zokuhamba ziqhubeka nokulula.
"Sinethemba lokuba ukubuyiswa okuqhubekayo kwemarike yokuzonwabisa kuya kwenza ukuba izikhululo zeenqwelo moya ziphinde zakhe uthungelwano lwazo kwaye zincede abantu abaninzi abahamba ngeeholide kulo lonke elase-UK ukuba babhukishe ikhefu phesheya ngaphandle kokuhamba umgama omde xa behamba kwisikhululo seenqwelomoya."